Antsoy izahay: 0086 769 87717299
Momba ny Summit
Boaty fitahirizana sarontava
Kitapo fanampiana voalohany
Ny orinasan-tserasera Summit dia nanangana fanangonana kit ny fanampiana voalohany
Fotoana fandefasana: Oktobra-30-2020
Summit Medical Products Co., Ltd. Nanangana ny The Professional First Aid Kit Collection rehetra isika dia mety mila kit vonjy taitra voalohany amin'ny fotoana fohy. Fitaovana fanampiana voalohany dia hanome anao ny filaminana. Manana karazana Kitapo Fanampiana Voalohany izahay, azo antoka fa afaka mahita iray mety amin'ny tsenanao ianao. Tongasoa eto amin'ny co ...Hamaky bebe kokoa »
Orinasa mpamokatra vokatra an-tampon'ny fihaonana an-tampony dia nanatevin-daharana ny geme guangzhou tamin'ny taona 10.13-10.15
Fotoana fandefasana: Okt-28-2020
Ny orinasam-pifandraisana an-tampon'ny fihaonambe dia nanatevin-daharana ny 2020 GEME-GUANGZHOU (Fihaonan'ny GBA Demand Docking ho an'ny fanondranana ireo fitaovana fisorohana ny epidemia sy ny Expo) tamin'ny 10.13-10.15. Taterina fa manerantany, hatramin'ny 18 Oktobra 2020, dia 39.596.885 ny tranga voamarina COVID-19, ao anatin'izany ny 11107 374 deat ...Hamaky bebe kokoa »
Summit orinasa mpamokatra vokatra ara-pahasalamana dia nanatevin-daharana ny fampiratiana indostrialy vonjy taitra iraisam-pirenena china faha-3 (shenzhen) tamin'ny taona 9.18-.9.20
Fotoana fandefasana: Oct-22-2020
Summit Medical Products Co., Ltd. Nanatevin-daharana ny fampirantiana ho an'ny indostria iraisam-pirenena momba ny varotra iraisam-pirenena sinoa faha-3 an'ny China (Shenzhen) ny endrika lolo vaovao KN95, saron-tava azo ampiasaina tokana (na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy), boaty fitahirizana sarontava, ampinga, kitapo fanampiana vonjy taitra, nahasarika mpanjifa maro Nanomboka tamin'ny ...Hamaky bebe kokoa »
Ny televizionam-paritany Guangdong dia nanadihady ny ozinina Summit tamin'ny 18 Jona 2020.
Fotoana fandefasana: Aug-19-2020
Ny tanjona hahatakarana ny Summit, amin'ny maha mpanamboatra za-draharaha manan-karena azy ao Dongguan, ny fomba hijoroana hanohitra ny vanim-potoana CV-19, ny vondrona Summit dia manana orinasa iray hamokarana entam-barotra, izay lehibe indrindra amin'ny orinasa any ivelany, nilatsaka ny orinasam-pitetezana midina mafy noho ny C ...Hamaky bebe kokoa »
Ny ben'ny tanàna lefitry ny tanànan'i Dongguan Andriamatoa Wan dia nitsidika ny orinasa Summit tamin'ny 28 Jiona 2020.
Ny governemanta dia te-hahatakatra ny toe-javatra misy ny orinasa mandritra ny CV-19 amin'izao fotoana izao, ny vondrona Summit dia manana orinasa iray hamokarana entam-barotra, izay lehibe amin'ny asa any ivelany, ny raharaham-barotra dia nilatsaka ambany noho ny CV-19 lany any ampitan-dranomasina, Etazonia. ary ny eropeana dia roa ma ...Hamaky bebe kokoa »
GANGDONG SUMMIT PRODUCTS MEDIA CO., LIMITED
Telefaona: 0086 769 87717299
Nanangana ny ...
Summit orinasa mpamokatra vokatra fitsaboana nanatevin-daharana ny ...